Louis Saha oo shaaca ka qaaday xiddiga kaliya ee awoodi kara inuu dib u soo nooleeyo Man United – Gool FM
Dajiye October 16, 2019
(England) 16 Okt 2019. Laacibkii hore xulka qaranka France ee Louis Saha ayaa shaaca ka qaaday xiddiga kaliya ee awoodi kara inuu dib u soo nooleeyo awooda ciyaareed ee kooxda Manchester United.
Louis Saha ayaa aaminsan in dhigiisa reer Portogal ee Cristiano Ronaldo uu awood u leeyahay inuu dib u soo nooleeyo Manchester United, kaddib in ka badan toban sano ka tagistiisa garoonka Old Trafford.
Cristiano Ronaldo ayaa u soo ciyaaray kooxda Manchester United intii u dhaxeysay 2003 ilaa iyo 2009 wuxuuna ku hogaamiyay hanashada koobab badan, gaar ahaan Champions League iyo Club World Cup sannadkii 2008-dii, laakiin intaas kaddib Real Madrid ayuu ugu dhaqaaqay qiimo dhan 94 milyan euro.
Manchester United ayaa sannado badan waxay la dhibtooneysaa hoos u dhac ku yimid tayada kooxda, taasoo saameyn ku yeelatay natiijooyinka, waxayna xilli ciyaareedkan miiska kala sareynta Premier League kaga jiraan booska 12-aad, iyaga oo aruursaday 9 dhibcood kaliya, kaddib 8 kulan ilaa iyo haatan laga soo ciyaaray horyaalka.
Haddaba wargeyska “Daily Mail” ayaa soo xigtay wareysi uu bixiyay laacibkii hore xulka qaranka France iyo kooxda Manchester United ee Louis Saha, waxaana uu yiri:
“Waxa kaliya aan idin sheegi karo ayaa ah inaan aad u jeclahay Cristiano Ronaldo, sababtoo ah wuxuu ka ciyaaraa Juventus, wuxuu da’a ahaan ka weyn yahay waqtigii ugu horreysay ee aan horey u kulanay”.
“Muxuu hadda ka sameynayaa kubadda cagta ka ciyaaryahan ahaan? Aad ayuu u waalan yahay, jir ahaan waa mid aad u fiican, waa tusaale fiican”.
Intaas kaddib Laacibkii hore xulka qaranka France ee Louis Saha ayaa wuxuu kula taliyay kooxdiisa hore ee Manchester United inay la saxiixato Ronaldo, wuxuuna yiri:
“Balanqaadkiisa waa wax aan la rumeysan karin, sidaas darteed mar labaad inaan ku arko Manchester United waxay noqon doontaa wax aan ka badneyn riyo uun, hubaal in saameyntu ay noqon doonto mid aad u weyn, laakiin laga yaabee in goolashiisa ay yaraadaan, laakiin wuxuu noqon doonaa mid cajiib ah”.